Alahady fahatelo amin’ny Karemy – 08/03/2015 – Tenin’Andriamanitra – Ecar Sainte Anne Anjomakely
Vakiteny voalohany: Boky Eksaody (Eks 20, 1-17)
Tamin’izany andro izany, Andriamanitra nanonona ireto teny rehetra ireto nanao hoe: “Izaho no Tompo Andriamanitrao, izay namoaka anao tany amin’ny tany Ejipta, tany amin’ny trano fanandevozana. Tsy hanana andriamani-kafa eo anatrehako ianao. Tsy hanao sarin-javatra voasikotra ho anao, na sary fampisehoana ny zavatra eny amin’ny lanitra ambony, na ny eny amin’ny tany ambany, na ny any amin’ny rano ambanin’ny tany. Tsy hiankohoka eo anatrehan’’ireny na hanompo azy akory ianao, fa Izaho Tompo Andriamanitrao dia Andriamanitra saro-piaro: ka amin’izay mankahala Ahy, mamaly ny heloky ny ray amin’ny zanaka hatramin’ny taranaka fahatelo sy fahefatra; ary amin’izay tia ahy sy mitandrina ny didiko kosa, mamindra fo hatramin’ny taranaka faharivo. Tsy hanonom-poana ny Anaran’ny Tompo Andriamanitrao ianao, fa tsy havelan’ny Tompo tsy ho voasazy izay manonom-poana ny Anarany. Tsarovy ny andro Sabata mha hanamasina azy.
Ny andro enina no hiasanao sy hanaovanao ny taozavatrao. Fa ny andro fahafito dia Sabata voatokana ho an’ny Tompo Andriamanitrao; tsy hanao asa na inona na inona, na ny tenanao, na ny zanakao lahy na ny zanakao vavy, na ny ankizilahinao, na ny ankizivavinao, na ny biby fiompinao, na ny vahiny izay tafiditra ny vavahadinao. Satria ny andro enina no nanaovan’ny Tompo ny lanitra, ny tany, ny ranomasina, mbamin’izay rehetra ao aminy, fa ny andro fahafito dia nitsaharany, ka izany no nanasoavan’ny Tompo ny andro Sabata sy nanamasinany azy.
Manajà ny ray aman-dreninao mba ho lava andro ianao any amin’ny tany omen’ny Tompo Andriamanitrao anao. Tsy hamono olona ianao. Tsy hijangajanga. Tsy hangalatra ianao. Tsy hitsangan-ko vavolombelona mandainga hamely ny namanao ianao. Tsy hitsiriritra ny tranon’ny namanao ianao, tsy hitsiriritra ny vadin’ny namanao, na ny ankizilahiny na ny ankizivaviny, na ny ombiny na ny ampondrany, na inona na inona amin’ny zavatry ny namanao”.
Vakiteny faha-2: Taratasy voalohan’i Md Paoly Apôstôly ho an’ny kristianina tany Kôrinty (1 Kôr 1, 22-25)
Izahay mitory an’i Kristy voafantsika, izay hadalana ho an’ny olombelona, fa fahendren’Andriamanitra ho an’ïzay voaantso.
Ry kristianina havana, ny Jody mila famantarana; ny Jentily mitady fahendrena; ary izahay kosa mitory an’i Kriaty voafantsika tamin’ny Hazofijaliana. Fanafintohinana amin’ny Jody izany, ary fahadalana amin’ny Jentily fa i Kristy herin’Andriamanitra syfahendren’Andriamanitra kosa amin’izay voaantso, na Jody, na Jentily. Fa izay toa fahadalan’Andriamanitra dia hendry noho ny fahendren’olombelona, ary izay toa fahalemen’Andriarnanitra, dia mahery noho ny herin’ny olombelona.
Evanjely Masina nosoratan’i Md Joany (Jo 2, 13-25)
Akaiky ny Pakan’ny Jody, ka niakatra tany Jerosalema i Jesoa. Ary hitany tao anatin’ny Tempoly ny mpivarotra omby aman’ondry sy voromahailala ary ny mpanakalo vola nipetraka tao, ka nanao kotopia tamin’ny tady madinika Izy, dia nandroaka azy rehetra mbamin’ny omby aman’ondry hiala amin’ny tempoly; nararany ny volan’ny mpanakalo vola, nazerany ny latabatra, ary hoy Izy tamin’izay nivaro-boromahailala: “Esory eto ireto, fa aza ataonareo trano fivarotana ny tranon’ny Raiko”. Dia tsaroan’ny mpianany fa efa voasoratra hoe: Ny fitiavako ny tranonao no maharîtra ny aiko. Fa niteny kosa ny Jody ka nanao taminy hoe: “Inona no famantarana asehonao aminay no manao toy izao Ianao ?” Dia namaly i Jesoa nanao hoe: “Ravao ity tempoly ity, fa hatsangako indray amin’ny hateloana”. Ka hoy ny Jody: “Enina amby efapolo taona no nanaovana ity tempoly ity, ka Ianao ve dia hanangana azy indray amin’ny hateloana e ?” Ny vatany anefa no tempoly nolazainy. Ary nony tafatsangan-ko velona Izy dia tsaroan’ny mpianany fa voalazany izany, ka nino ny Soratra masina sy ny teny voalazan’i Jesoa izy ireo. Raha mbola tany Jerosalema Izy tamin’ny fetin’ny Paka, dia maro no nino ny Anarany, fa nahita ny fahagagana nataony; nefa tsy natoky azy ireo i Jesoa, satria nahalala azy rehetra Izy, sady tsy mba nila olona hilaza aminy ny amin’ny olona Izy, fa ny Tenany ihany dia nahalala izay ao am-pon’ny olona.
Alahady faharoa karemy – 21/02/2016 : Tenin’Andriamanitra